म रूस लागि चीन एक भिसा चाहिन्छ
चीन जनताहरु गणतन्त्र सबैभन्दा संसारमा populous छ। तर यो यो राज्य मात्र सुविधा छैन। चीन, धेरै मा रोचक ठाँउहरु को विश्वभरिबाट पर्यटकहरु आकर्षित छ। तर तपाईं रूसी लागि चीन एक भिसा चाहिन्छ? आखिर, रूस र चीन मैत्री सर्तहरू छन्।
वास्तवमा, मात्र भिसा धारकों आवश्यक कूटनीतिक पासपोर्ट। अन्य सबै नागरिक अनुसार देश प्रवेश लागि नियम संग भिसा पालन गर्नुपर्छ।
एक भिसा चीन मा आवश्यक छ भने पत्ता लगाउन, र दर्ता यसको आवश्यकताहरु पत्ता लगाउन, को नागरिक मास्को वा सेन्ट पीटर्सबर्ग मा दूतावास सम्पर्क गर्नुपर्छ। यो सीमा क्षेत्रमा को बासिन्दा लागि लाभ प्रदान गर्दछ टिप्पण लायक छ।
भिसा लागि आवश्यक कागजात सूची, नियम, हो: कम्तिमा छ महिना को एक वैधता अवधि संग पासपोर्ट, एक प्रश्नावली को आवेदक, फोटो र भर्न रोजगारीको प्रमाणपत्र स्थिति र तलब संकेत।
चिनियाँ भिसा7व्यापार दिन भित्र जारी छ। हङकङ - म चीन को एक विशेष क्षेत्र भ्रमण गर्न चीन एउटा भिसा चाहिन्छ? यो एक अलग भिसा, देश मा प्रवेश को अग्रिम जारी छ जो आवश्यक छ।
आयात र मुद्रा मान निर्यात असीमित मात्रा मा हुन सक्छ। देश को सम्पत्ति हो जो प्राचीन, को निर्यात लागि, तपाईं चीन संस्कृति मंत्रालय देखि अनुमति प्राप्त गर्नु पर्छ। आयात रक्सी लागि कुनै थप दुई भन्दा सय चुरोट - - सुर्ती लिएको आयात प्रतिबन्ध छैन 50 भन्दा बढी एमएल - आयात perfumery उत्पादनहरु लागि 1 भन्दा कम लीटर।
चीन भिसा काम काम गर्न यो देश पठाइएका छन् जो विदेशी नागरिकहरु लागि आवश्यक छ। यस्तो भिसा प्राप्त गर्न, नागरिक विशिष्ट काम को लागि एक स्वीकृति उदाहरणका लागि, काम गर्ने अधिकार, अस्थायी काम र यति मा लागि निमन्त्रणा प्रमाण दिन्छ कि कागजात हुनुपर्छ। यो भिसा र चिकित्सा प्रमाणपत्र सूचना छ आवश्यक पनि छ। काम भिसा एकल वा बहु द्वारा हुन सक्छ।
चीन समूह भिसा निम्न कागजातहरू जारी:
- चीन मा दर्ता एक यात्रा एजेन्सीको निमन्त्रणा;
- व्यक्ति को एक समूह छैन कम5भन्दा मान्छे (तीन प्रतिहरू) को सूची।
नाम र थर, जन्म मिति (विदेशी जस्तै: सूची बारेमा हरेक पर्यटक सूचना निर्दिष्ट गर्नुपर्छ पासपोर्ट), पासपोर्ट नम्बर, मुद्दा को मिति र वैधता को अवधि को पूरा को मिति।
एक समूह भिसा को दर्ता लागि प्रोफाइल र फोटो आवश्यक छैन। चीन एक भिसा लागि टिप्पणी कुनै पनि सुधारका र erasures बिना भरिएको हुनुपर्छ। गल्ती गरियो भने, कागजात फेरि पूरा हुन आवश्यक छ।
म देश मार्फत ट्रान्जिट को मामला मा चीन एउटा भिसा चाहिन्छ
चीन मा, त्यहाँ जसको नागरिक प्राप्त हुन सक्छ केही देशहरूमा संग केहि सम्झौताहरू छन् एक ट्रान्जिट भिसा Zhoushuizi - डालियान अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अप सातवटा गर्न दिनको लागि। मा आगमन भिसा मात्र विमानस्थलमा जारी छ कृपया ध्यान दिनुहोस्। यस्तो भिसा प्राप्त गर्न, एक विदेशी नागरिक अर्को देशमा एउटा उडान, पासपोर्ट मा फोटो लागि पासपोर्ट, टिकट प्रस्तुत गर्न र भुक्तानी भिसा शुल्क हुनुपर्छ - 14US।
"चिडियाघर कहानिहरु" याल्टा: विवरण
मार्ग M10: उपयोगी जानकारी
नारा ponds: तस्बिर, वर्णन र समीक्षा
जहाँ मास्को स्वादिष्ट र सस्तो खाना (कफी पसल वा रेस्टुरा) मा?
दर्जा सोची sanatoriums। विवरण, यात्री समीक्षा
अब्खाजिया मा छुट्टी को समीक्षा। यात्रा सुझावहरू।
अदालत शक्तिहरु मा वकील
के राम्रो भान्सा मा छत गर्न: चयन
वसन्त मा रोपण लागि प्याज सेट तयारी गर्दै। प्याज सेट कसरी रोपेर गर्न
बाढी जोखिम। सुरक्षित व्यवहार मा जनसंख्या लागि सिफारिसहरू के हुन्
कसरी आज संसारमा vampire हुन? फिल्म "वास्तविक पिशाच": अभिनेता र भूमिकाको
माहीगीर Kerri: किन अभिनेत्री कहिल्यै राजकुमारी Leia भन्दा अन्य जो कोहीलाई पनि प्ले छ?
सेतो स्थिर मशरूम र अन्य च्याउ सूप व्यञ्जनहरु को सूप
"Citroen C5": प्राविधिक विनिर्देशों। Citroen C5: समीक्षा, फोटो
एबेरर्जिनको संरक्षण एकाधिक व्यञ्जनहरु
तपाईं गलत व्यक्ति पूरा 10 संकेत
वृद्ध मा धमनी उच्च रक्तचाप